CSR in the Hotel and Tourism Industry
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ စီးပွားရေးအကြံပေး၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်၏ "CSR in the Hotel and Tourism Industry" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောချက် Presentation အား အောက်ပါ Links များတွင် Download ဆွဲယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Hotels and Tourism Sector Third Wave Reforms Seminar
July 30, 2014 – Nay Pyi Taw
A Seminar on the Third Wave reforms for the hotels and tourism sector has kicked off at the Ministry of Hotels and Tourism office in Nay Pyi Taw on 30th July 2014.
U Htay Aung, Union Minister, presented his opening speech. He quoted that the purpose of today’s seminar is to wrap up the previous seminars held in the nation and Naypyidaw and, based on that, to lay down necessary actions for the future. The government has already undertaken the First, Second and Third wave reforms in order to developapeaceful democratic nation.
The Ministry of Hotels and Tourism have also createdaResponsible Tourism Policy in response to the increasing number of inbound tourists, to maximize tourism related benefits and to minimize tourism impacts within the country. Furthermore, the policy on Community Involvement in Tourism and Dos and Don’ts for visitors have been published and delivered throughout the nation. In addition, the Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020 comprising of six strategies and 38 short-term and long-term plans has been successfully launched and the e-visa system will be inaugurated this September. Tourism-related human resource development trainings are also organized regularly by the endorsement of the Ministry, regional governments, Myanmar Tourism Federation (MTF) and its affiliates.
Later in the meeting, the acceleration of the Third Wave Reforms, which is concerned with ensuringasolid foundation for democracy andahigher living standard for people, was presented by honorable presenters such as Prof Dr. Aung Tun Thet (President’s advisor), U Kyaw Kyaw Hlaing, Dr. Thein Aung, U Thaung Su Nyein, and Dr. Min Zaw Oo. Director General U Aung Zaw Win and Director General U Tint Twin from this Ministry, U Win Aung (UMFCCI), and U Yan Win (UMTA).
The Seminar on the Third Wave Reforms for the Hotels and Tourism Sector came to an end with the concluding remarks by the Union Minister and suggestions from the participants.
Trans : E E Khin
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းကဏ္ဍ တတိယအဆင့်အရှိန်မြှင့်တင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
(နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၃၀ ရက်)
နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၃၃)၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနတွင် ယနေ့ နံနက် ပိုင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် “ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းကဏ္ဍ တတိယအဆင့်အရှိန်မြှင့်တင်မှု လုပ်ငန်း စဉ်များဆွေးနွေးပွဲ”အခမ်းအနားသို့ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ပြောကြားရာတွင် ယခင်တိုင်းဒေသကြီးများနှင့်ပြည်နယ်များ၌ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ များနှင့်နေပြည်တော် ၌ နောက်ဆုံးအဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အမျိုးသားအဆင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ ဖော်ထုတ်ချက်ရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဆက်လက်အကောင် အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်သွားမည့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ၀ိုင်းဝန်း အကြံပြုဆွေးနွေးပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ယနေ့အခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ် ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံ တော်အစိုးရ အနေဖြင့်လည်း ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ဒီမိုကရေစီထွန်းကား သည့် နိုင်ငံတော်ဖြစ်ရေး တွင် တိုင်းပြည်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိစေရေးနှင့်ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွား ဘ၀မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရေး တို့အတွက် First Wave, Second Wave, Third Wave လုပ်ငန်း စဉ်အဆင့်ဆင့် ချမှတ် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ နှစ်စဉ်တိုးတက်များပြားဝင်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည်များနှင့်ပတ်သက်၍ အစစအဆင်ပြေမှုရှိစေရန် မိမိတို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန အနေဖြင့်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာများကို အမြင့်မားဆုံးရရှိနိုင်ရန်၊ ခရီးစဉ်ဒေသများတွင် ဆိုးကျိုးသက်ရောက် မှု အနည်း ဆုံးဖြစ်စေနိုင်ရန်နှင့်တာဝန်ယူမှုရှိသောဝန်ဆောင်မှုများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ရန်တို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အစိုး ရ၊ ပုဂ္ဂလိက၊ ပြည်သူများ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည့် “တာဝန်သိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမူဝါဒ (Responsible Tourism Policy)”ကို ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများအပါအ၀င် တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည် နယ်အစိုးရ အဖွဲ့များ သို့ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၄င်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေး မူဝါဒ (Policy on Community Involvement in Tourism) နှင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီး သွားဧည့်သည်များအတွက် ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန်များ ဖော်ပြထားသည့် (Dos and Don’ts for Visitors) စာအုပ်များကိုလည်း ထုတ်ဝေဖြန့် ချီနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ် ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဆက်လက်ပြောကြားရာတွ် အနာဂါတ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် နိုင်ရေးအတွက် မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် (၆) ခုနှင့် နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်သွားမည့် စီမံကိန်း (၃၈) ခုပါဝင်သော “မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ပင်မစီမံကိန်း (၂၀၁၃-၂၀၂၀) (Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020)” ကိုလည်း ထုတ်ဝေနိုင် ခဲ့ပြီးဖြစ် ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားခရီး သွားဧည့်သည်များ ၀င်ရောက်မှု အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် e-Visa စနစ်ကိုလည်း လာမည့် စက်တင်ဘာ လအတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်း ဧည့်သည်များ၏ ၀င်ရောက်/ထွက်ခွာမှု ခရီးစဉ် ဒေသများသို့ သွားလာလည်ပတ်မှု၊ တည်းခိုနေထိုင်မှု စသည်ဖြင့် အစစအဆင်ပြေလွယ်ကူစေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် အပါအ၀င် လက်အောက်အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ၄င်းအပြင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ် သည်နှင့်အညီ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော ၀န်ဆောင်မှုကောင်းများပေးနိုင်ရန်အတွက် လူ့စွမ်းအား အရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်၊ ဦးကျော်ကျော်လှိုင်၊ ဒေါက်တာ သိန်းအောင်၊ ဦးသောင်းဆုငြိမ်းနှင့် ဒေါက်တာ မင်းဇော် ဦးတို့မှ နိုင်ငံတော်၏ တတိယအဆင့်အရှိန်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသီးသီးရှင်း လင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်ဇော်ဝင်း နှင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးတင့်သွင်တို့မှ ယခင် အမျိုးသားအဆင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖော်ထုတ်ချက်များနှင့် ၀န်ကြီးဌာနမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွား မည့် ရှေ့လုပ်ငန်းအစီအမံများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြကြပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၊ ဥက္ကဌ ဦးဝင်းအောင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊ ဥက္ကဌ ဦးရန်ဝင်းတို့မှ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များမှ ပါဝင်အကြံပြုဆွေးနွေးကာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ နိဂုံးချုပ် အမှာစကားပြောကြားပြီး အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေသန္တရဗဟုသုတလေ့လာရေး ခရီးလာရောက်ကြသော မန္တလာကောလိပ် B.A(Tourism)ပထမနှစ်ကျောင်းသား/သူများနှင့်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၂၆)ရက်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင်သည် ယနေ့နံနက်တွင် နေပြည်တော်၊ တော်ဝင် ကုမုဒြာ ဟိုတယ်၌ ဒေသန္တရ ဗဟုသုတလေ့လာရေး ခရီးလာရောက်ကြသော မန္တလေးမြို့၊ မန္တလာကောလိပ်ရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဘာသာရပ် ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ ပထမနှစ်ကျောင်း သား၊ ကျောင်း သူများအား တွေ့ဆုံခဲ့ပါ သည်။ ရှေးဦးစွာ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအား ရင်းနှီးစွာ မိတ်ဆက်ကြပြီးနောက် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပါက ခရီးသွားလုပ်ငန်းအကြောင်းကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် သိရှိ ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတိုင်း သွက်လက် ထက်မြက်စွာကြိုးစားကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ကျောင်းတွင်သင်ကြားပို့ချပေးသော ဘာသာရပ်များကို လေ့လာ ဆည်းပူးကြရမည့်အပြင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်နှင့် သတင်းများကိုလည်း အင်တာနက် အသုံးပြု၍ ထပ်ဆင့်လေ့လာဆည်းပူးကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့အချိန်မှာ သတင်းအချက် အလက်နှင့်နည်းပညာစနစ်သည် ပိုမိုမြင့်မား လာသည်နှင့် အမျှ ၄င်းကိုအသုံးပြု၍ လေ့လာလျှင် လေ့လာသလောက် အကျိုးရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်းစာအုပ်များ လေ့လာ သင်ကြားရုံမျှ မက ပြင်ပမှ အကြောင်းအရာများကိုလည်း အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖတ်ရှုလေ့လာမှသာ တိုးတက်အောင်မြင်ကြမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးစဉ်ဒေသ တစ်ခု ချင်းအလိုက် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အရင်းအမြစ်များ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို သိရှိလေ့လာထားရမည့်အပြင်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုလုံး မည်ကဲ့သို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရှိထားရန်လည်း လိုအပ်ပါ ကြောင်း၊ ယခု ခရီးသွား လုပ်ငန်း ဘာသာရပ် ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ ကျောင်း ဆင်းပြီး လျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လိုအပ်လျှက်ရှိသော ခရီးသွားလုပ်ငန်း လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို ဖြည့်ဆည်းရာ၌ ၄နှစ်တာကာလ သင်ကြားလေ့လာခဲ့ရသည့် အကြောင်းအရာနှင့် အတွေ့အကြုံများကို လုပ်ငန်းခွင်တွင် လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မည့် တိုင်းပြည်အတွက် တန်ဖိုးရှိ သောပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြရမည် ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် အကျယ်တ၀င့်မှာကြားပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ စိုင်းကျော်အုန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့်ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မန္တလာကောလိပ်ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဘာသာရပ် ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ ပထမနှစ်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ (၇၅)ဦး တို့နှင့် နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန်မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ ဒေသန္တရဗဟုသုတလေ့လာရေးခရီးလာရောက်ကြသော မန္တလေးမြို့၊ မန္တလာကောလိပ်ရှိ ခရီးသွား လုပ်ငန်းဘာသာရပ်ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ပထမနှစ် ကျောင်သား ၊ကျောင်းသူများအဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော် သို့ရောက်ရှိပြီး ရေပန်းဥယျာဉ်၊ နေပြည်တော်အမျိုးသားအထိမ်းအမှတ်ဥယျာဉ်၊ ဆာဖာရီ ဥယျာဉ်နှင့် ဟိုတယ်ဆိုင် ရာ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို လေ့လာကြမည်ဖြစ်ပြီး (၂၇.၇.၂၀၁၄)ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ဥပ္ပါဒသန္တိစေတီ တော်မြတ်အား သွားရောက်ဖူးမြှော်ကြကာ မန္တလေးမြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ နိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာဝင်း အတွင်းရှိ ဟိုတယ်များဖြစ်သော Hilton Nay Pyi Taw Hotel နှင့် Kempinski Hotel များ၏ ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှု အခြေအနေများကို သွားရောက်ကြည့်ရှုကာ အချိန်မှီပြီးစီးရေး မှာကြားခဲ့ပါသည်။
၄င်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် နွယ်သာကီဟိုတယ်၌ ဟိုတယ်များမှ အထွေထွေမန်နေဂျာများနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများအား လက်ခံမည့် ဟိုတယ်များမှ အထွေထွေ မန်နေဂျာများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပါသည်။
ယင်းသို့ဆွေးနွေးရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ယခုအစည်းအဝေးသည် ဒုတိယအကြိမ် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်စဉ်က အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ ကျင်းပစဉ် တည်းခိုနေထိုင် ရေးအတွက် ဟိုတယ်များက ရည်မှန်းထားသည့် အိပ်ခန်းအရေအတွက်များအား ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လ (၃၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား တည်ဆောက်ပြီးစီးရေးအတွက် သဘောတူညီခဲ့ပါကြောင်း၊ ယနေ့ဆွေးနွေးရာတွင် ဟိုတယ်များ အလိုက် ဆောင်ရွက်ပြီး စီးမှု ကို ဆွေးနွေးတင်ပြရန်ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား ပါသည်။
ဆက်လက်၍ တက်ရောက်လာသော ဟိုတယ်များမှ အထွေထွေမန်နေဂျာများက ၄င်းတို့ဟိုတယ်အလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြကြပါသည်။ ထို့နောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်ဇော်ဝင်းက လာမည့် သြဂုတ်လ ၈ရက်မှ၁၀ရက်နေ့အထိကျင်းပမည့် (၄၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးအတွက် တည်းခိုနေရာချထားပေးမည့် အစီအစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြ ပါသည်။
ထို့နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပမည့် နိုင်ငံတော်အဆင့်အစည်းအဝေးများတွင် ဟိုတယ်များ အနေဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုကောင်းမွန်စေရေး သာမက လုံခြုံရေး ကိုလည်း အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၄င်းအပြင် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ လ (၂၂) ရက်နေ့ မှ (၂၉)ရက်နေ့အထိ အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဖိုရမ်-၂၀၁၅ ကို နေပြည်တော်၊ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင် ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာများတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါ ဖိုရမ်အတွက်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ထားကြရန် မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေး တက်ရောက် လာသူများမှ မေးမြန်းတင်ပြချက်များအပေါ် ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။